LA OGAADAY: Liiska Todoba Difaac Oo Ay Man United Isha Ku Hayso Iyada Oo Luminaysa Xiisihii Difaaca Tottenham Ee Toby Alderweireld. – GOOL24.NET
LA OGAADAY: Liiska Todoba Difaac Oo Ay Man United Isha Ku Hayso Iyada Oo Luminaysa Xiisihii Difaaca Tottenham Ee Toby Alderweireld.
Kooxda Manchester United ayaa waqti dheer xiisaynaysay difaaca dhexe ee xulka qaranka Belgium iyo kooxda Tottenham ee Toby Alderweireld waxayna Red Devils hadda u muuqataa mid ka daalaysa xiisaha aan midho dhalka noqon ee Alderweireld iyada oo Mourinho ay ka go’an tahay in uu soo xoojiyo difaaca dhexe ee kooxdiisa ka hor xili ciyaareedka cusub.
Chris Smalling iyo Phil Jones ayaa booskooda lumin kara haddii uu Jose Mourinho helo difaacyo fiican oo uu si buuxda iskugu halayn karo iyada oo xaalada Eric Bailly ay noqotay mid habanti la’aan ah markii uu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo macalinkiisa Mourinho.
Laakiin Victor Lindelof ayaan muujin qaab ciyaareed uu Mourinho aamini karo taas oo keentay in macalinka ree Portugal uu si wayn u doonayay saxiixa Alderweireld. Kooxda Tottenham ayaa ka war qabta xiisaha wayn ee Man United basle waxay doonaysaa in Toby Alderweireld ay ka bixiso lacagtii ay Liverpool ka soo bixisay Van Dijk oo kale.
Laakiin waxaa hadda soo baxaya in ragga suuqa kala iibsiga u qaabilsan Man United ayna si buuxda ugu qanacsanayn sumcada Toby Alderweireld iyo waliba rekoodhkiisa dhaawacyada waxayna ilwareed Man United ahi bixisay xogta difaacyada ay United u jeedsan doonto.
Ilwareed aad u saraysa ayaa wargayska Manchester Evening News, u xaqiijisay in Manchster United hadda isha ku hayso sidii ay difaac dhexe ugu soo dhex xulan lahayd liiska kala ah Raphael Varane (Real Madrid), Jerome Boateng(Bayern Munich), Kalidou Koulibaly (Napoli), Milan Skriniar ( Inter Milan), Alessio Romagnoli (AC Milan), Jose Gimenez (Atletico Madrid) iyo Caglar Soyuncu(Freiburg).
Raphael Varane oo ka mid ah ciyaartoyda uu Mourinho ku faano in uu soo barbaariyay ayaa Real Madrid boos joogto ah ka haysta laakiin waxa uu markasta ahaa mid uu Mourinho jeclaa in uu la soo saxiixdo halka Kalidou Koulibaly oo Napoli ka tirsani uu ku jiro magacyada difaacyada ay kooxo waa wayn oo kale doonayaan.
Jerome Boateng oo Bayern Munich ka tirsan ayaa dhawaan mustaqbalkiisa shaki la galiyay wuxuuna ku soo baxay liiska difaacyada dhexe ee uu Mourinho doonayo.
Inkasta oo markii hore ay Man United bartilmaameedka kowaad ka dhiganaysay saxiixa difaaca Tottenham ee Toby Alderweireld waxay haddana fahansan tahay in lacagta ay Spurs ku doonayso iyo in heshiiskiisu dhacayo 2019 ay tahay laba arimood oo kala fog.
Si kastaba ha ahatee, Manchester United ayaa hadda diyaarsatay liiska todoba difaac ee aan soo sheegnay si ay uga dhex raadsato mid ay kooxdeeda ku soo xoojiso.